कहाँ बन्छन् महँगा वाईनहरु ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
कहाँ बन्छन् महँगा वाईनहरु ?
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २, २०७१
‘आज पार्टी गरौं’ भन्नासाथै पार्टीसँगै अल्कोहल (वाइन वा रक्सी) कुनचाहीँ सर्व गर्ने हो भन्ने कुरा पहिला आउँछ । पहिले पाइने लोकल रक्सी पिउनेहरु जड्याहा मानिन्थे भने कोहीलाई ट्वाँकेको ट्याग लगाइन्थ्यो । तर अहिले पार्टीमा विदेशी वाइन वा वियर पिउनेहरु भलादमी कहलिन्छ । अल्कोहललाई अहिले सोसल ड्रिङक्स्कोरुपमा पिउनेहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । सन २०१३ मा विश्वको सबैभन्दा महंगो वाइन भनेर दुवैमा बेचिएको थियो, जसको मुल्य १ लाख ९५ हजार डलर थियो । यो भन्दा पहिला पनि ३ लाख डलरसम्मका वाइन बेचिएका छन् । विदेशमा बनेका वाइन, बन्ने ठाँउहरु र मुल्यको केही जानकारी यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
इटालीमा रहेको टोसकाना क्षेत्रमा उत्पादन हुने टुस्क्यान वाइन संसारको प्रसिद्ध वाइनमध्ये एक हो । उर्वर शक्ति धेरै भएको यहाँ एक लाख ६० हजार एक्कर्समा अङ्गुर लगाइएको छ । यहाँ ७० प्रतिसत रेड वाइन उत्पादन गरिन्छ । धेरै अगाडिदेखी नै वाइन उत्पादन हुने गरेता पनि १०७९ देखि वाइन विदेश निर्यात पनि हुन थालेको हो । रिकासोली नाम गरेका व्यक्तिले जर्मन फ्रान्स जस्ता देशको भ्रमण गरी विभिन्न प्रजातीका अङ्गुरको अध्ययन गरेका हुन् र टोसकानामा ल्याई अङ्गुरको खेती बढाएसँगै उनले वाइनको उत्पादन पनि गरे । १९४८ मा रिकासोलीले उत्पादन गरेको वाइन संसारको उत्कृष्ट वाइन थियो । यहाँ ७० भन्दा बढि स्वादका ब्रान्डेड वाइन उत्पादन गरिन्छ । “विवन्डी सान्टी टेनुटा आईएल ग्रेपो रिसर्भा” नामक वाइन इटलीको सबैभन्दा महंगो वाइन हो, जसको मुल्य ५२ हजार चार सय ४६ डलर सम्म पर्न आउँछ ।
युनाइटेड स्टेटमा रहेको क्यालीफोर्नीया संसारको सबैभन्दा बढि वाइन उत्पादन गर्ने चौथो क्षेत्र हो । अमेरीकामा १२ सय वटा वाइन कम्पनी रहेका छन् जसमध्ये चार सय भन्दा बढि वाइन उत्पादन गर्ने कम्पनी यहाँ रहेका छन् । संसारको सबैभन्दा पुरानो वाइन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री पनि यही रहेको छ, जुन ६ हजार बर्ष पुरानो रहेको बताइएको छ । यसले अहिले पनि वाइन उत्पादन गरिरहेको बताइएको छ । यहाँ १ लाख ५३ हजार ३ सय एक्करसमा अङ्गुर खेति गरिएको छ । यहाँ १३ हजार २ सय डलरसम्म पर्ने वाइनहरु पाइन्छन् ।
३. मेनडोजा वाइन
अर्जेन्टिनाको मेन्डोजामा उत्पादन हुने वाइन अर्जेन्टिनाकै पहिलो बढि वाइन उत्पादन हुने ठाउँ हो । अर्जेन्टिनाको कुल वाइन उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशत मेनडोजामा उत्पादन हुन्छ । यो संसारको पहिलो क्षेत्र हो, जहाँ सबैभन्दामाथिको उचाइमा अङ्गुर खेती लगाइएको छ । यो संसारको बढि वाइन उत्पादन गर्ने क्षेत्रमध्ये पाँचांैमा पर्दछ । यो क्षेत्रमा ३ लाख ५६ हजार एक्करस्मा अङ्गुर खेति गरिएको छ । यहाँको गुलावी रङ्गको वाइन प्रख्यात छ । ५ हजार ५ सय ६१ डलरसम्मका वाइन पाइने यहाँ थुपै्र किसिमका वाइन उत्पादन गरिन्छन् ।
फ्रान्समा रहेको लोइरे भ्यालीमा रहेको १ लाख ८५ हजार एक्करस जमिनमा गरिएको अङ्गुर खेतीबाट वाइन उत्पादन गरिन्छ । यहाँ ६८ हजारसम्मका वाइनहरु रहेका छन् । पहिलो शताव्दीदेखि नै वाइन बनाउने गरेको यहाँ १० हजारजति वाइन फ्याक्ट्री रहेका छन् । लोइरे भ्यालीमा उत्पादन गरिने ह्वाइट वाइन यहाँको प्रसिद्ध वाइन हो ।
दक्षिण अमेरीकी राष्ट्र चिली विश्वको धेरै वाइन उत्पादन गर्ने नवौं राष्ट्र हो । १९९५ देखि १२ वाइन फ्याक्ट्रीबाट सुरुवात गरेको चिलीले २०१४ सम्म आइपुग्दा १०० वटा फ्याक्ट्री पु¥याइसकेको छ । यहाँ उत्पादन भएका वाइनहरु १ हजार ३८ डलरसम्म पर्न आउँछन् । यहाँको वाइन युरोेपको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वाद भएको वाइन मानिन्छ । चिलीमा १ हजार ६० एक्करस अङ्गुर खेती गरिएको छ र ८५ प्रतिसत अङ्गुर वाइन बनाउनमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नांगै भएर टीभी हेर्ने अभिनेत्रीको यस्तो अनौठो बानी